February 12, 2020 - Myitter
ဝူဟနျဗိုငျးရပျဈ အတှကျ အဖွမေပျေါသေးခငျ နိုကျဂြီးရီးယားမှာ ရောဂါတဈမြိုးထပျပျေါ ဝူဟနျဗိုငျးရပျဈအတှကျ တဈကမ်ဘာလုံး အာရုံနောကျနခြေိနျမှာ နိုကျဂြီးရီးယားမှာ ရောဂါတဈမြိုးထပျပျေါလာခဲ့ပွီလို့ သိရပါတယျ။ အဆိုပါနိုငျငံမှာ ထူးဆနျးတဲ့အဖြားရောဂါကွောငျ့ အခုဆိုရငျ သဆေုံးသူ (၁၅)ဦးအထိ ရှိသှားခဲ့ပွီလို့ သိရပါတယျ။ လူ(၁၀၀)ကြျော ကူးစကျခံထားရပွီး၊ ဘာရောဂါလညျး အတညျမပွုနိုငျသေးပါဘူး။ ဒီအကွောငျးကို The Independent, […]
တက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေဖွင့်တော့မယ်သားရေ။ သားသူငယ်ချင်းတွေအားလုံး ကိုယ်ဝါသနာပါရာတက္ကသိုလ်အသီးသီးကိုတက်ကြဖို့ ပြင်ဆင်နေကြပြီပေါ့။ မေမေ့သားလေးလည်း ဘဝရဲ့တစ်ဆစ်ချိုးအကွေ့ကို ချိုးကွေ့မသွားခဲ့ဘူးဆိုရင် ဟိုးအရင်သားငယ်စဉ်ကတည်းက အိပ်မက်မက်ခဲ့တဲ့ ဆေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်ကြီးကို တက်ရောက်ပညာသင်ကြားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေပြီပေါ့နော် သားအမြဲပြောတတ်တဲ့စကားလေးက“သားကြီးလာရင် လူသားတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်တဲ့၊လူတွေရဲ့ရောဂါဝေဒနာတွေကိုသက်သာပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေးနိုင်တဲ့ ဆရာဝန်ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ်မေမေ။ ဖြစ်အောင်လည်းသားကြိုးစားမယ်” ငယ်စဉ်ကတည်းက မိဘအပေါ်သိတတ်လိမ္မာပြီး အတန်းစဉ်ပညာထူးချွန်ဆုတွေ အမြဲရခဲ့တဲ့သားလေးဟာ ၂၀၁၉ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကိုလည်း ဘာသာစုံဂုဏ်ထူး(ရမှတ်၅၂၇)နဲ့ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ သားဖြစ်ချင်တဲ့ဆရာဝန်ကြီးလုပ်လို့ရပြီဆိုတဲ့အသိနဲ့ အောင်စာရင်းထွက်တဲ့နေ့က မေမေဝမ်းသာလွန်းလို့ မျက်ရည်များတောင်ကျခဲ့မိပါတယ်။ […]
ဖေဖော်ဝါရီနောက်ဆုံးပတ် လူတိုင်း အပြင်မထွက်သင့်သည်ထိ လေထုအရည်အသွေး ဆိုးရွားမည် ….
ဖေဖော်ဝါရီ နောက်ဆုံးပတ်အတွင်း လူတိုင်းအပြင်ထွက်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်သင့်သည်အထိ ရန်ကုန်မြို့၏ လေထုအရည်အသွေး အညွှန်းကိန်းသည် အန္တရာယ်ရှိအဆင့်သို့ ရောက်ရှိမည်ဟု မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသည်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ ရက်မှ ၂၉ ရက်အထိ လေထုအရည်အသွေးအညွှန်းကိန်းမှာ ၃၀၁ မှ ၅၀ဝ အထိ ရှိမည်ဖြစ်၍ လူတိုင်းအပြင်ထွက်ခြင်းမှ […]
ထိုင်းမွာ စက်ရုံ ၂၀၀ ကြော်ပိတ်သိမ်းလိုက်သဖြင့် အလုပ်သမားပေါင်း ၂၅၀၀ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်,,,,,
ထိုငျးမှာ စကျရုံ ၂၀၀ ကြျောပိတျသိမျးလိုကျသဖွငျ့ အလုပျသမားပေါငျး ၂၅၀၀ အလုပျလကျမဲ့ဖွဈ ထိုငျးနိုငျငံမှာ ၂၀၂၀ ဇနျနဝါရီ တလတညျးတငျ စကျရုံပေါငျး ၂၂၀ ပိတျသိမျးပွီး လူပေါငျး ၂၅၀၀ လောကျအလုပျလကျမဲ့ ဖွဈခဲ့တယျလို့ ထိုငျးစကျမှုလကျမှုဝနျကွီးဌာန စကျမှုလုပျငနျးဦးစီးဌာနက ထုတျပွနျပါတယျ။ ဒီနှဈ ဇနျနဝါရီလအတှငျး စကျရုံ အလုပျရုံပေါငျး […]
ဝူဟန် ကကျောင်းသားတွေ ကို ပြန်သွားခေါ်ခဲ့တဲ့​ မြန်​မာ့​လေယာဉ်​မှူးကြီး ရဲ့ လက်​ရှိ အ​ခြေအ​နေ ….
ကျ မကလေယာဉ်မှူးကြီးဦးခုပ်ခန့်မုံရဲ့ဇနီးပါ။ ရေးသင့်တဲ့အချိန်ရောက်ပြီမို့ အသိအမှတ်ပြုပေးကြသူအားလုံးကို လေးစားစွာဖြင့်ရေးပါတယ်။ နောက်တခုက နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့ မိဘလိုဖြစ်နေတဲ့ဆွေမျိုးစုဝင်တွေ ရဲ့သတင်းအမှားတွေကိုအမှန်သိစေခြင်ပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီ လ ၁ ရက်နေ့မတိုင်ခင် တရက်ကြိုစောပြီး ဝူဟန်မှကျောင်းသားတွေသွားခေါ်ရမည်။ ၂ ပါတ်စာပြင်ပေးထားပါလို့ဆိုတာနဲ့ ကျမနဲ့ကျမသမီးတို့ suitcase ကိုထည့်စရာရှိတာထည့်ကြပါတယ်။ ဒီတခါတော့ အရင်ခရီးထွက်တာလိုမဟုတ်ပဲ တအိမ်လုံးစိတ်နေစိတ်ထားကစပြင်ကြရတာပါ။ တအိမ်လုံး စ […]
နည်းလမ်းမမှန်သော ဖြေရှင်းနည်းဖြင့် အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှု့များ မြန်မာမြေပေါ်မှာရော ကမ္ဘာ့မြေပေါ်မှာပါ အမြန်ကျဆုံးပါစေ ….
နည်းလမ်းမမှန်သော ဖြေရှင်းနည်းဖြင့်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှု့များ မြန်မာမြေပေါ်မှာရောကမ္ဘာ့မြေပေါ်မှာပါ အမြန်ကျဆုံးပါစေ။ Photo – Ma Maw Maw / ရန်ကုန် တရားဝင်ကွာရှင်းထားတဲ့ခင်ပွန်းဟောင်းကမိဘအိမ်ကနေခြိမ်းခြောက်ခေါ်သွားပြီး(၂၆)ရပ်ကွက်တောင်ဒဂုံက ကားဘော်ဒီရုံတစ်ခုမှာဓာတ်ဆီလောင်းပြီးမီးရှို့ခြင်းခံရတဲ့သမီးလေးလွင်မာဦးကိုအေးချမ်းဆိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာလေးမှာ နာခိုပြီပေါ့နှမငယ်…..။ ဘဝ ဝဋ်ကြွေးတွေ ဒီဘဝမှာကျေပါစေ။ ကိုသက်=တာဝန်ခံ အယ်ဒီတာ ဧရာဝတီ အသံ unicode version နညျလမျးမမှနျသော ဖွရှေငျးနညျးဖွငျ့အမြိုးသမီးမြားအပျေါအကွမျးဖကျမှု့မြား […]
မစ်ဒယ်ဝိတ်ချ န်ပီယံကာကွယ်ပွဲ ထိုးသတ်ရန် မြန်မာ့ဖိုတ်တာအောင်လအန်ဆန် လက်မှတ်ထိုးလိုက်ပြီ ….
မစ်ဒယ်ဝိတ်ချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲ ထိုးသတ်ရန် မြန်မာ့ဖိုတ်တာအောင်လအန်ဆန် လက်မှတ်ထိုးလိုက်ပြီး မစ်ဒယ်ဝိတ်ချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲ ထိုးသတ်ရန် မြန်မာ့ဖိုတ်တာအောင်လအန်ဆန် လက်မှတ်ထိုးလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ့ဖိုတ်တာကို စိန်ခေါ်သူကတော့ နယ်သာလန် နိုင်ငံသား De Ridder ဖြစ်ပါတယ်။ နယ်သာလန် နိုင်ငံသား၏ စိန်ခေါ်မှုကို မြန်မာ့ဖိုတ်တာက လက်ခံခဲ့ပါတယ်။ စိန်ခေါ်သူ နယ်သာလန် နိုင်ငံသားကတော့ ၁၁ […]